मगलवार, असार १०, २०७६ ११:२३:०५
नेपाल कृषि प्रधान देश । यहाँका ९० प्रतिशत जनता कृषिमै आधारित छन् । कृषकले कृषी जन्य वस्तुको उत्पादन गर्दा लागत सामानको सही मूल्यसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
कृषकहरु जहिलेपनि विचौलियाका सिकार हुने गर्छ । कृषिमा आधारित पशुपंक्षी तथा व्यवसायसँगकाे ती विचाैलियालाइ कारवाहि कसले, कहिले, हुन्छ या हुन्न ? र पशुप्राणीलाइ पनि मानव प्राणी कै रुपमा व्यवहार गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने सन्दर्भमा पशु सेवा विभागका महानिर्देशक, डा. विमल कुमार निर्मलसँग गरिएको संक्षिप्त सम्वाद :
विभागबाट पछिल्लो समयमा के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले सरकार संघीयतातिर लागेकोले संरचना अनुसार काम बाड्फाड् हुँदैछ । कोहि स्थानिय निकायतिर जानु पर्ने हुन्छ । हाम्रो विभागमा सेवा कटौती गरेको छ। अब को कहाँ जानु पर्ने हो ।
लामो समयदेखि पशु सेवा अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा काम गर्दै अहिले महा निर्देशक समेत बन्नु भएको छ । मानव र अरु पशु बिचमा तुलनात्मक तरिकाले हेर्ने हो भने पशु डाक्टरलाई र मान्छेको डाक्टरलाई हेर्ने दृस्टिकोणमा फरकपना किन पाईएको होला ?
पहिला पहिला त्यस्तो धेरै थियो तर अहिले मान्छेलाई लाग्ने धेरै रोगहरु पशुबाट आएको भेटिएको छ । त्यसैले हिजोआज हेर्ने दृस्टिकोणमा त्यस्तो धेरै फरक छैन त्यै पनि केही भने अवस्य छ । त्यो हुनुमा हामी अरु प्राणीलाई भन्दा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल बढी गर्छौ ।
मानवताले भरिएका मानवहरु सबै प्राणीलाई समान तरिकाले हेरिनु पर्छ भन्ने आवाजहरु सबैतिरबाट उठिरहेका छन् । पशुहरुलाई मासुको लागि ओसारपसार गर्दा निर्दयी तरिकाले लगेको देखिन्छ । यसलाई पशु सेवा विभागले कसरी हेरेको छ ?
जसरी मानव अधिकारवादीहरु धेरै छन् त्यसरी नै जनावर अधिकारकर्मीहरु पनि बढिरहेका छ् । यसको मतलव सबै एउटै हौं भनी बुझ्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । जनावरको खरिद बिक्रि गर्दा देखिने ती अमानवीय गतिविधि रोक्नको लागि विभिन्न पशु सेवा नियमहरु छन् तर कारवाहीमा नसमेटिएको हुँदा हामी पशु कल्याण ऐन ल्याउने तगारीमा छौँ । त्यो कानुन पश्चात अमानवीय तरिकाले पशुपंक्षीको ओसारपसार गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।
हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धी भइरहेता पनि कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको मूल्य घटाइन्छ, किन ? कृषकको श्रमको अपमान गरेर हो ?
कृषी जन्य वस्तुको मूल्य घट्नुको पछाडी समयले गर्दा हो । उब्जनी धेरै हुँदा घट्ने र बढ्ने हुन्छ ।
यदि यस्तो हुने हो भने कृषि पेशामा लागेका कृषकको हितमा कहिले काम हुन्छ त ? विचरा रगत र पसिना बगाएर खेतबारीमा काम गरेका हुन्छन् । पशु पंक्षीसङ्गै खाना खाएर वा सुतेर भए पनि श्रम गर्नेहरुको सम्मान कहिले हुन्छ ? दुधको मूल्य घटाएर कृषकलाई आन्दोलित हुने बनाइयो । अनि मात्र पहिलाको नै मूल्य कायम गरीयो ।
हामी खेतबारी र पशुपंक्षी सङ्ग सम्बन्धित व्यवसायमा लागेका कृषकहरुको लागि नै राम्रो हुने गरि काम गर्दै छौँ ।
यसको मतलब जतिबेला उत्पादन धेरै हुन्छ,त्यति बेला किसान मारमा पर्ने ? अनि भण्डारण गरि राख्न सकिदैन?
हामीले नयाँ प्रविधिहरु ल्याउदै छौं । दुधलाई जम्मा गरेर पाउडर मिल्क बनाउने अनि अरु मिठाई बनाउने गरी प्रविधि भित्र्याउदै छौँ।
कुखुरा पालकले एउटा कुखुराको एउटा अण्डाको रु. ५ पाउँदा उपभोक्ताले रु. १५ तिर्न बाध्य छन् । किसानले पाउने पर्ने रकम नपाएको हो कि उपभोक्ताले महँगोमा तिर्न बाध्य पारिएकाे ?
अरु वस्तुको रकम बढे सङ्गै अण्डाको मूल्य बढेको हैन ।
त्यसो भए किन किसानले रु. ५ पाउनु पनि जायज हो ?
खासमा भन्ने हो भने विचौलियाहरुले बिचमा खाने गर्दा किसानहरु मर्कामा परेका छन् । यसको रोकथाम गर्ने गरि हामी नयाँ कार्यक्रम लिएर अघि बढेका छौँ ।
बिचौलियाहरुलाई कारवाही गर्न सकिदैन ?
ऐनलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । अब काम हेरिकन कारवाहीको भागिदार विचौलिया हुनै पर्छ ।
साभार: नामी साप्ताहिक